जापानमा १ लाख ६३ हजार तलब सहित रोजगारीको अवसर ! - jagritikhabar.com
जापानमा १ लाख ६३ हजार तलब सहित रोजगारीको अवसर !
जापानको एक कम्पनीले पाँच नेपाली कामदारको माग गरेको छ । कामदारले हप्तामा ५ दिन र दैनिक ७ घण्टा काम गर्नु पर्ने छ । करार अवधि ३ वर्षे रहेको छ । कम्पनीको नियमअनुसार कामदारले वार्षिक बिदा पनि पाउने छन् ।
कामदारले बस्न सहित तलब एक लाख ५२ हजार हजार माथि सम्म पाउनेछन् । इच्छुक कामदारले क्यापिटल इन्टरनेस्नल प्रालिको कार्यालय बसुन्धरा काठमाडौँको कार्यालयमा मंसिर १३ अथवा लगनखेलको कार्यालयमा १४ गते अन्तरवार्ता दिनु पर्ने छ ।
स्वदेशमा हुने जीवन बिमा, स्वदेशमा हुने मेडिकल खर्च कामदारले बेहोर्नु पर्नेछ । विदेशमा हुने बिमा शुल्क, विदेशमा गरिने मेडिकल खर्च, हवाई टिकट रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने छ ।
– आवेदन गर्नु अघि सधैं LT विवरण जाँच गर्नुहोस् – आवेदन गर्नु अघि बाँकी कोटा बारे जान्नुहोस्। कोटा सकियो होला ।- भर्ती एजेन्सी र विदेशी रोजगारदाता को स्थिति र लेनदेन इतिहास बारे जान्नुहोस्। तपाईले यसलाई खोज्नको लागि गुगल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
यस कागजातमा उल्लेख गरिएको भन्दा बढी नगद नदिनुहोस्। वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि अभिमुखीकरण तालिम लिनु अनिवार्य छ । रोजगारीका लागि विदेश जानुअघि, तपाईंले काम गरिरहनुभएको देश, तपाईंले काम गरिरहनुभएको कम्पनी र तपाईंलाई उपलब्ध गराइने सुविधाहरूबारे राम्ररी पढ्नुहोस्। यसलाई ध्यानपूर्वक पढेर मात्र नियम र सर्तहरूमा हस्ताक्षर गर्नुहोस्। कृपया त्यसको एक प्रति सुरक्षित रूपमा साथमा राख्नुहोस्।